Toekarena ankapobeny: ratsy toerana hatrany i Madagasikara | NewsMada
Toekarena ankapobeny: ratsy toerana hatrany i Madagasikara
Ho tapitra tsy ho ela ny taona 2018, fitondrana vaovao indray izany ny andrasana manomboka ny 2019 hatramin’ny 2023. Raha eo amin’ny lafiny toekarena, tsy misy fandrosoana misongadina ny eto Madagasikara, araka ny tatitra navoakan’ny Banky iraisam-pirenena, ny FMI, ny GCI-Global Competitiveness Index, ny Doing Business. Ratsy toerana hatrany i Madagasikara, tsy mahasarika mpampiasa vola, laharana faha-167 amina firenena 190, raha ny tatitra farany tamin’ny 2017 navoakan’ny Doing Business. Tsy vaovao amin’ny maro fa anisan’ny dimy voalohany amin’ny tany mahantra indrindra isika.
Raha ny hita tamin’ny vaovao navoakan’ny FMI indray, laharana 154 amina firenena 187 ity Nosy goavambe ity raha zahana ireo singa manatsara ny fiainan’ny olombelona : ampy sakafo, afaka mianatra, fonenana mendrika, tsara fitsaboana, sns… Voahaja ny zo maha olombelona. Tsy hita taratra amin’ny Malagasy maro anisa ireo.
Mbola ratsy toerana ihany koa i Madagasikara eo amin’ny fitantanana sy ny sosialim-bahoaka. Laharana faha-32 aty Afrika amina firenena 54 isika, momba ny fitantanan-draharaham-panjakana. Manaporofo izany ny kolikoly avo lenta eto amin’ny firenena na eo aza ny Bianco, ny Samifin, sy ny sampana maro hafa lazaina ho mahaleo tena, toy ny fitsarana, araka ny tatitra navoakan’ny The Economist Group. Mampalahelo sady mahamenatra : faha-4 amin’ny firenena maloto indrindra eran-tany i Madagasikara.
Isaky ny fotoam-pifidianana, misy fampanantenana hatrany ny hanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy, saingy miharatsy hatrany hatramin’izao. Ho hita eo indray ny manaraka.